Magalada Garowe oo lagu soo dhaweeyay Ganacsato Reer Puntland ah oo ka yimi Dalalka Uganda iyo Kenya – gaayte Hotel Magalada Garowe oo lagu soo dhaweeyay Ganacsato Reer Puntland ah oo ka yimi Dalalka Uganda iyo Kenya | gaayte Hotel
by admin · 31st January 2015
Garowe(pp) Waxaa maanta oo Sabti ah magalada Garowe xarunta dowlada Puntland ee Soomaaliyeed si diirran loogu soo dhaweeyay wafdi Ganacsato ah oo deegaan ahaan kasoo jeeda Puntland balse ganacsiyo heer caalami ah ku leh dalalka Kenya iyo Uganda.
Soo dhawaynta Ganacsatadaan ayaa waxaa ka qayb qaatay XIldhibaano uu horkacayay Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Puntland , Wasiiro, Ganacsato, Culimo udiin, Isimo iyo dadwayne aad u faro badan.
Wafdigan ayaa mudo ku sugnaan doono deegaanadda Puntland oo qaarkood aysan waligood arag, waxayna sidoo kale kulamo la qaadan doonaan madaxda ugu saraysa ee dowladda iyo ganacsatadd kale.
Kulan lagu soo dhawaynayo ayaa loogu sameeyay Hotelka New Reys, halkaasoo warbaahinta shir jaraa’id loogu qabtay.
Ugu horayn waxaa warbaahinta la hadlay Xasan Guuleed oo si weyn looga yaqano Bariga Africa, wuxuna sheegay ujeedkooda waxa uu yahay, Guuleed ayaa sheegay in ka badan 30-sano inaysan imaan Puntland ayna aad ugu farax san yihiin in dalkii dib loogu soo laabto oo laga qayb qaato horumarka ka socda.
Xasan Guuleed waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dalka la aamino oo dhaqaalaha dibadda yaalaa la galiyo, wuxuna sheegay mudada ay joogayaan inay qiimayn ku samayn doonaan deegaanadda Puntland gaar ahaan dhanka maalgashiga iyo ganacsiga.
Ganacsatadda Puntland waxaa u hadlay Jaamac Salaad Dhagadheere, wuxuna sheegay soo dhawaynta qiimaha leh ee wafdigan loo sameeyay inay tahay mid ay horay u dhigteen oo ay sababsadeen, ayna ku faraxsan yihiin inay dalkii qiimayn kusoo sameeyaan.
Jaamac Salaad waxa uu sheegay inay wax badan ka sugayaan ganacsatadda Puntland ee maalgashiga ku sameeyay dalalka dhaca Bariga Africa.
Xildhibaan Cabdixakiim Axmed Maxamed ”Dhoobadaareed” oo ku hadlayay afka daowladda ayaa sheegay inay ku farax san yihiin markii ugu horaysay ganacsato intaasi leeg ay dib ugu soo laabtaan dalkoodii si ay qiimayn ugu sameeyeen, waxa kale uu sheegay Dhoobadaareed inay ka dhowrayaan dhaqaalaha faraha badan ee ay galiyeen dalalka ka baxsan Soomaaliya ay dalkooda galiyaan si looga wada faa’iido.
Suldaan Siciid Maxamad Maxamuud oo ah Suldaanka Wabeeneeya oo ka mid ahaa Odayaashii kulankan ka hadlay ayaa sheegay inay dhankooda ku faraxsan yihiin booqashadaan gaaban ee ay ganacsatadu dalkooda ku yimaadeen, sido kale isla shirka ayaa laga sheegay inay sidoo kale socdaalkoodu uu qayb ka yahay ka qayb galka shirka Beesha Wabeeneeya oo ka dhici doono Deegaanka Qow ee Gobalka Bari.
Next story ramaas Software oo maanta wareejisay website iyon database
Previous story slider 3